အညွှန်း | Sanchaung Journal
Category Archives: အညွှန်း
September 18, 2011 admin	3 Comments
ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ (ချစ်နိုင် – စိတ်ပညာ)
အနှစ်၃၀ (ချစ်နိုင် – စိတ်ပညာ)
Google Dictionary is closed down.
Google Dictionary is no longer available.
You can use Google web search to find definitions or Google Translate for your translation needs.
​ကျွန်တော် အမြဲသုံးနေတဲ့ Google Service တစ်ခု ပိတ်သွားပါပြီ။
ကျွန်တော် အခု http://www.ldoceonline.com/ (Longman English Dictionary Online – LDOCE) ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြပါသည်။
သူက အသံတွက်ပါသည်။ ဖော်ပြချက်တွေ အတော်ရှင်းလင်းပါသည်။
Programming စာအုပ်တွေ ရယူနိုင်တဲ့ နေရာပါ။
မြန်မာတွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ – ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တာ။ အမြဲ တမ်းတ တန်ဖိုးနေတာ – သင်္ကြန်ပါ။
1985 ခုနှစ်ကတည်းက သင်္ကြန်မိုး အခု 2011 အထိ သင်္ကြန်မိုးက ရွာနေတုန်းပဲ။
August 9, 2010 freebird	1 Comment
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဒါရိုက်တာ ကိုအောင်မင်းသိမ်း ကဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းအနေနဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတာကို ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီလို့ ထင်မိပါတယ်။
ကိုအောင်မင်းသိမ်းက ဒီဇာတ်ကားကို ဇော်ထူး။ မေသန်းနု နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
ကိုအောင်မင်းသိမ်းရဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဇော်ထူး သရုပ်ဆောင်တာ သူ့ ဇာတ်ရုပ်နဲ့သူနဲ့ကွက်တိ။ မေသန်းနုကလည်း သူ့ နေရာမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်လို့ဒီဇာတ်ကားကို ကျွန်တော်သဘောကျခဲ့တာပါ။ ကိုအောင်မင်းသိမ်း ရဲ့ ဇာတ်ကားအမည်က – ဖန်အိမ်ထဲကငါး။
Continue reading Sleeping with the Enemy →
အခုအချိန်မှာ အားလုံးပိုကောင်းသတဲ့ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ -လို့အမြဲတမ်း တီထွင်ကြံဆနေရတဲ့ခေတ်။
အားလုံးကလည်း တခုနဲ့ တခု မတိမ်းမယိမ်း ကောင်းမွန်တာချည်းပဲ။
ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ စားသုံးသူကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ-
ဒီလို ထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်မှုလေးနဲ့စားသုံးသူကိုဆွဲဆောင်သွားတာ –
2010 FIFA World Cup အတွက် လက်တင် အဆိုတော် Shakira က သီဆိုပေးထားပါတယ်။
“Waka Waka” ဆိုတာ အာဖရိကက စစ်သားတွေ သီဆိုလေ့ရှိသော Zangalewa သီချင်းကို မှီငြီးထားပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို Shakira နှင့် John Hill တို့ ကေ၇းဖွဲ့ ခဲ့ပါတယ်။
June 14, 2010 freebird	Leaveacomment
iPhone 4G ကလည်း ထွက်တော့ မယ်။
Android ဖုန်းတွေကလည်း အလားအလာရှိတယ်လို့ပြောနေကြတယ်။
ဘာကို ရွေးချယ်ရမလဲ –
သူများ ယောင်လို့ လိုက်ယောင်တာထက် – မိမိ ကိုယ်တိုင် နားလည်ပြီးရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့–
အသေးစိတ် ဖတ်လို လျှင် -
April 25, 2010 freebird	Leaveacomment
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင်တန်းအသီးသီးမှာ သွားရောက် မလေ့လာနိုင်သူများအတွက် Internet မှ လေ့လာနိုင်တဲ့ web site တစ်ခု ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ပါတယ်
စာသားများကို pdf အနေနှင့် အသံဖိုင်များကို mp3 အနေနှင့် download ယူထားပြီး။ Internet မရှိသည့် အချိန်မှာလည်း ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်